android ဖုန်းများအတွက် ultra Lock ကိုလျှောက်လွှာ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » ultra Lock ကို - က App Lock ကို, ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို Vault
ultra Lock ကို - က App Lock ကို, ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို Vault APK ကို
အခြား App ကို Lock ကို applications များအားလုံးသည်သင့်ရဲ့ apps များနှင့် Vault သော့ခတ်ရုံ PIN နံပါတ်နှင့်စံနမူနာသော့ခတ် options များကိုပေး။ အချိန်အများစုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြိမ်အနည်းငယ်ဘို့ငါတို့ပခုံးကိုကျော် peeping ငါတို့ PIN နံပါတ်သို့မဟုတ်စံနမူနာခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်မိသားစုဝင်များမကြာခဏသင့်ရဲ့ PIN နံပါတ်ကိုခန့်မှန်းပါသလဲ? ကျွန်တော်တို့သည်ထိုက Ultra Lock ကို PIN ကိုမှသင်၏ problem.Apart ဖြေရှင်းဖို့ app နဲ့စံနမူနာသော့ခတ် option ကိုက Ultra Lock ကိုအောက်ပါထူးခြားတဲ့သော့ခတ် options များထောက်ပံ့ပေး
★နာရီနှင့်မိနစ် PIN နံပါတ်: ဒီ option ကိုသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်သော့ PIN နံပါတ်အဖြစ်လက်ရှိနာရီနှင့်မိနစ်သတ်မှတ်။ လက်ရှိအချိန် 10 လျှင်ဥပမာအားဖြင့်,: 50 လေး, ထို့နောက်သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်သော့ PIN ကို 1050 ဖြစ်လိမ့်မည်။ နေ့စဉ်မိနစ်အပေါ်ဆဲလ်ဖုန်းအပြောင်းအလဲများအတွက်နာရီနှင့်မိနစ်ကတည်းက, သင့် PIN နံပါတ်ကိုလည်းတိုင်းမိနစ်ကိုပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုသင်အစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ PIN နံပါတ်ကိုမှတ်မိစရာမလိုပေသည်။
★နေ့စွဲနှင့်လ PIN နံပါတ်: သင်တိုင်းမိနစ်ရန်သင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင် PIN နံပါတ်ကိုပြောင်းလဲသွားချင်ကြဘူးလျှင်, သင်လက်ရှိနေ့စွဲနှင့်လရန်သင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင် PIN ကိုပြောင်းသွားသောနေ့စွဲနှင့်လ PIN ကိုအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိနေ့စွဲ 05 / 06 / 2018 DD အတွက် / MM / YYYY format နဲ့ပါလျှင်ဥပမာ, ထို့နောက်သင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင် PIN ကို 0506 ဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်နေ့တွင် PIN ကို 0606 ဖြစ်လိမ့်မည်။
★ဘက်ထရီနှင့်ဘက်ထရီ PIN နံပါတ်: ဘက်ထရီနှင့်ဘက်ထရီ PIN ကိုသင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းအတွက်လက်ရှိဘက်ထရီအဆင့်အဖြစ်သင့်မျက်နှာပြင်သော့ PIN နံပါတ်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိဘက်ထရီအဆင့် 50% ပါလျှင်ဥပမာအားဖြင့်, ထို့နောက်သင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင် PIN ကို 5050 ဖြစ်လိမ့်မည်။
အပြင်သူတို့ထံမှ, Ultra Lock ကို, သူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုမိနစ်နှင့်နေ့စွဲ PIN ကို, လနဲ့မိနစ် PIN နံပါတ်, နာရီနှင့်နေ့စွဲ PIN နံပါတ်, မိနစ်နှင့်ဘက်ထရီ PIN ကို, အဖြစ်နာရီ၏အမျိုးမျိုးသောပေါင်းစပ်, မိနစ်, ရက်စွဲ, လနှင့်ဘက်ထရီအဆင့်ကိုထောက်ပံ့ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့အခြားသူတွေသင့်ရဲ့ App ကို Lock ကို password ကိုခန့်မှန်းရန်အဘို့အရာဖြစ်စေမည်။
app ကိုအခြား Cool အင်္ဂါရပ်များ,
★အချိန်-အခြေပြု Lock ကို: သင်အချိန်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး app များကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အစုံအဘို့အသော့ခတ် enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်9pm တွင်ရန်5လေးကနေသင့်ရဲ့ရုံးနာရီအတွင်းသာသင်၏လူမှုကွန်ယက် app များကိုသော့ခတ်နိုင်ပြီးထိုကာလပြီးနောက်ကသော့ဖွင့်။
★ Wi-Fi-အခြေပြု Lock ကို: သင့်ချိတ်ဆက် Wi-Fi အပေါ်အခြေခံပြီး app များကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အစုံအဘို့အသော့ခတ် enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ရုံး Wi-Fi ချိတ်ဆက်သောအခါဥပမာအားဖြင့်, သင်က Messaging app များအဘို့အသော့ခတ် enable နိုင်ပြီးသင်ကနေ disconnect သည့်အခါသူတို့အဘို့အသော့ခတ်ပိတ်ထားပါ။
★ကျူးကျော်ထောက်လှမ်း: တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့သော့ခတ် app များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်နောက်တစ်ကြိမ်သော့ဖွင့်သည့်အခါကအကြောင်းအကြောင်းကြားစာကိုပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်လျှင်ဒီ app ရှေ့ကင်မရာသုံးပြီးဓါတ်ပုံကိုဖမ်းယူပါလိမျ့မယျ။
★နောက်ဆုံးသော့ဖွအချိန်: သင်အထူးသဖြင့် app များကိုသော့ဖွင့်သည့်အခါက Ultra Lock ကိုအဆိုပါသော့ခတ် apps များ၏နောက်ဆုံးဖွင့်လှစ်အချိန်နှင့်အတူတစ်အကြောင်းကြားစာကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
★ Lock ကို PIN ကို Modify: ကျနော်တို့ပြောင်းပြန်ပေးနှင့်သင့် PIN ကိုခန့်မှန်းများ၏တာဝန်ခိုင်မာစေသောအရာ modifiers offset ။ သငျသညျပြောင်းပြန်အထူးပြု option ကိုနာရီနဲ့မိနစ် PIN နံပါတ်အမျိုးအစားကိုသုံးပါနှင့်လက်ရှိအချိန် 12 အကယ်. ဥပမာ: 15 pm တွင်, ထို့နောက်က Ultra Lock ကိုလက်ရှိအချိန်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သော 5121 အဖြစ် App ကို Lock ကိုအဘို့အသော့ခတ်မြင်ကွင်း PIN နံပါတ်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
★ကျပန်းကိန်းဂဏန်း keypad: အ App ကို Lock ကို၏သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်ဂဏန်းခလုတ်ပြသထားတယ်။
★ဓာတ်ပုံနှင့်ပြခန်း Lock ကို: သင်က Ultra Lock ကိုအတွင်းအပြင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသော့ခတ်နိုင်ပါ။
သင်တစ်ဦး Beta ကို tester ဖြစ်သို့မဟုတ် app ကိုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်များကိုလိုလျှင် help@miragestack.com ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦး E-mail ကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူထိတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ultra Lock ကို - က App Lock ကို, ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို Vault
5.51 ကို MB